7 ဇန္နဝါရီလ 2020: los solicitantes de asilo mexicanos pueden ser enviados desde la frontera de los Estados UnidosaGuatemala.
28 စက်တင်ဘာလ 2019: ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံနှစ်ခုမွမ်းမံမှုများ:
တရားသူကြီးဒျေါလီ Gee, ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ဗဟိုခရိုင်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံး, ဟုသူကပြောသည် 27 de septiembre que la administración no puede hacer cambios al acuerdo de consentimiento (သဘောတူညီချက်) တည်ဆဲ, ဒါဟာသဘောတူညီချက် Flores ကိုခေါ်.
သဘောတူညီချက် Flores ကလေးများထက် ပို. အဘို့အထိန်းသိမ်းခံရမရနိုင်ပြောပါတယ် 20 နေ့ရကျ. အစိုးရကဆိုပါတယ် 21 သူတို့ခိုလှုံခွင့်ပေးသနားသို့မဟုတ်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးမှီတိုင်အောင်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကလေးတွေနဲ့အတူခိုလှုံခွင့်-ရှာကြံမိသားစုများထိန်းသိမ်းထားဆက်လက် enable သင့်သောသြဂုတ်လ. သို့သော်တရားသူကြီး Gee ပြောပါတယ်: “Flores များ၏အခြေချနေဆဲတရားဝင်သည်နှင့်အပယ်ဖျက်ခဲ့ပါရသေး”.
ဝါရှင်တန် Ketanji ဘရောင်းအတွက်အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီး Jackson က, D.C., ဟုသူကပြောသည် 27 စက်တင်ဘာလအစိုးရကအရှိန်ယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးမှုများတိုးချဲ့နိုင်ဘူးကြောင်း, အရှိန်ထုတ်ပယ်ခြင်းအဖြစ်လူသိများ. ဇူလိုင်လအတွက်, အမေရိကန်အစိုးရ. THE. သူဟာအမေရိကန်တလျှောက်လုံးလျှောက်ထားဖို့အရှိန်ထုတ်ယူတိုးပွားလာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်. THE. သူတို့ကအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်တိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ရပြီသက်သေမပြနိုင်သူအထောက်အထားမဲ့လူတွေ. သို့သော်တရားသူကြီးကသူတို့တစ်တွေကြားနာခဲ့ကြသည်အထိလူဦးပြည်နှင်ဒဏ်ပေးမရနိုင်ဟုဆိုသည်.
အမေရိကန်အစိုးရသည်ဤနှစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်များစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်. ယခုမူကားများအတွက်, အစိုးရကတရားရုံးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များလိုက်နာရမည်.
update ကို 11 စက်တင်ဘာလ 2019
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. အဆိုပါတရားရုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြားတိုင်းပြည်များမှတဆင့်အမေရိကန်နယ်စပ်ထံသို့လာသောသူသည်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရန်မပြောနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ဖြစ်ခြင်းကာလဘို့, သူတို့ကလမ်းအပေါ်အခြားတိုင်းပြည်တွင်ခိုလှုံခွင့်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပါလျှင်လူဦးသာအမေရိကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အမေရိကန်အစိုးရသည်ဤသစ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆိုပြုထား 16 ဇူလိုင်လ. ထိုအချိန်မှစ., အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးမှတ်စာသုံးပြီးရပ်တန့်ခဲ့ကြ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တရားရုံးများတွင်ဤနည်းဥပဒေဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့်တရားရုံးချုပ်အစိုးရကယခုအသစ်ကစည်းမျဉ်းကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါကပြောသည်, တရားရုံးအမှုများကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခင်. အဆိုပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) သူကတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစိုးမိုးရေးသုံးပြီးစတင်မည်ဟုဆိုသည်.
ဤနည်းဥပဒေမက္ကစီကိုမှတဆင့်ခရီးထွက်တဲ့သူဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိကမှခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာအောင်မဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆိုလို. သငျသညျကိုအမေရိကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုတောင်းခံပါလျှင်. UU ။, ဒါဟာကြားနာခြင်းမရှိဘဲပယ်ချနိုင်ပါသည်, သူသည်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်မက္ကစီကိုခိုလှုံခွင့်သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးငြင်းပယ်လိုက်ပါသည်မဟုတ်လျှင်. ဤသည်အသစ်သောစည်းမျဉ်းကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ခုစလုံးကိုသက်ရောက်မှု.
စာမကျြနှာပျေါမှာအသေးစိတ် Read မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Clinic.
9 စက်တင်ဘာလ 2019, update ကို
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကို (မြင် 16 ဇူလိုင်လ) ဒါဟာပြီးသားကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အရီဇိုးနားအတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့. ယနေ့အာဏာရတက္ကဆက်ပြည်နယ်နှင့် New မက္ကဆီကိုနယ်စပ်အရာရှိများလည်းခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအားလုံးကို applications များကိုလက်ခံရန်ဆက်လက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်.
23 သြဂုတ်လ 2019, update ကို
အမိမြေလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်၏ဦးစီးဌာန. နှင့်ထုတ်ဝေကျန်းမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာန United States မှာခိုလှုံခွင့်ရှာကြံကလေးများနှင့်မိသားစုများ၏ထိန်းသိမ်းရေးအပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထုတ်ဝေ.
လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာ, ကလေးတွေထက်ပိုပြီးအဘို့အချုပ်နှောင်၌မတည်ဘဲနိုင်ပါတယ် 20 နေ့ရကျ. အသစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအမိမြေလုံခြုံရေးဌာနသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုသည်အထိပြည်နှင်ဒဏ်ပေးနေကြသည်ခိုလှုံခွင့်ခိုလှုံခွင့်ရှာကြံကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခံခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. အသစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသေးအတည်ပြုကြပြီမဟုတ်. ကျနော်တို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုမကြာမီကို update.
သင်တစ်ဦးဖတ်နိုင်သည် အဆိုပြုထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်အတွက်.
16 သြဂုတ်လ 2019, update ကို
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကို (ယင်းကိုကြည့်ပါ 16 ဇူလိုင်လလာမည့်) သူကအမေရိကန်နှင့်မက္ကစီကိုတို့အကြားနယ်စပ်ရောက်ရှိလာသောခိုလှုံခွင့်-ရှာဖွေနေသူပထမဦးဆုံးသူတို့ခရီးထွက်အခြားတိုင်းပြည်တွင်ခိုလှုံခွင့်ရှာအံ့သောငှါရမယ်လို့ပြောပါတယ်.
ယနေ့တွင်, သုံးတရားသူကြီးတွေဆန်ဖရန်စစ္စကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အယူခံတစ်တရားရုံးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်. အယူခံတရားရုံးကနဝမအကြိမ်မြောက်ရပ်ကွက်ဖုံးလွှမ်း, ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အရီဇိုးနားအပါအဝင်. တရားသူကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အရီဇိုးနားအတွက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအားလုံးကို applications များကိုလက်ခံရန်ဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်, သူတို့ကတခြားနိုင်ငံများတွင်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားကြပြီမဟုတ်ရင်တောင်. ဒါပေမယ့် EE. THE. သငျသညျရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံမှအမေရိကန်နယ်စပ်မှခိုလှုံခွင့် applications များကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်စေခြင်းငှါ. THE. နှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုအတွက်မက္ကစီကိုရွှေ့ပြောင်းလမ်းမှာအခြားနိုင်ငံသို့မဟုတ်နိုင်ငံများ၌ခိုလှုံခွင့်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ပြီမဟုတ်လျှင်.
တရားသူကြီးကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် applications များပယ်ချခဲ့ကြောင်းညာဘက်သို့မဟုတ်တရားဝင်မဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်. သူတို့ကရိုးရှင်းစွာတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးသစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကိုပိတ်ဆို့ဖို့လုံလောက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေလည်းမရှိသေးသည်ဟုဆိုသည်. ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထောက်ပံ့အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများသစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကိုအမေရိကန်ဥပဒေဆန့်ကျင်ကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြ.
တရားသူကြီးတို့၏ပျက်ကွက်သည်ဟုဆိုလိုသည်, ဖြစ်ခြင်းကာလဘို့, မက္ကစီကိုကတဆင့်လာသူတွေကိုနေဆဲကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အရီဇိုးနားအတွက်အမေရိကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သို့သော်တက္ကဆက်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုရှိအမေရိကန်နယ်စပ်များတွင်ခိုလှုံခွင့်ရှာကြံမယ်ဆိုရင်, သူတို့တစ်တွေကြားနာခြင်းမရှိဘဲပယ်ချနိုင်ပါသည်.
5 သြဂုတ်လ 2019, update ကို
လွန်ခဲ့သောသီတင်းပတ်အတွင်း, အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် “ဘေးကင်းလုံခြုံတတိယနိုင်ငံတစ်ခုသဘောတူညီချက်” ဂွာတီမာလာနှင့်အတူ.
ဒါဟာသဘောတူညီချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာမက္ကဆီကို-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသက်ဆိုင်. ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်ဂွာတီမာလာမှတဆင့်တို့သည် လာ. အဲဒီမှာခိုလှုံခွင့်မရှာလိုလျှင်, ထို့နောက်သူတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်မရှာလို့ရပါတယ်.
ဂွာတီမာလာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိများစွာသောလူသဘောတူညီချက်အန္တရာယ်မှာကလူတင်ထားတော်မူမည်လို့ပြောရှိပါတယ်. နှစ်နိုင်ငံစလုံး၏တရားရုံးများတွင်စိန်ခေါ်မှုများရှိလိမ့်မည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကအခြားနိုင်ငံများနှင့်အလားတူသဘောတူညီချက်များလက်မှတ်ရေးထိုးရန်မျှော်မှန်းပြောပါတယ်, မက္ကစီကိုအပါအဝင်, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, ပနားမားနှင့်ဘရာဇီး.
အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကြောင့်အမေရိကန်နယ်စပ်သို့ရောက်ရှိလျှင်ဆိုလိုသည်. THE. ဂွာတီမာလာမှတဆင့်ဖြတ်သန်းအပြီး, သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားလို့မရပါဘူး. ပြန်, သငျသညျဂွာတီမာလာမှသို့မဟုတ်မူရင်းကိုသူတို့တိုင်းပြည်ပြန်သွားဖို့ရှေးခယျြနိုငျ.
ဒါဟာသဘောတူညီချက်အဓိကအားအယ်လ်ဆာဗေးဒေါနှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ်၏လူဦးထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာဂွာတီမာလာကိုထိခိုက်စေပါဘူး. ဂွာတီမာလာနှင့်ဂွာတီမာလာအတွက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရကြောက်လန့်သောသူမဆိုအခြားသူတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာခွင့်ရှိသည်ဆိုပါကကြည့်ဖို့အမေရိကန်အရာရှိများနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ရှိရမည်.
ကစတင်သည်ရှေ့တော်၌ထိုဂွာတီမာလာကွန်ဂရက်သဘောတူညီချက်အတည်ပြုရမယ်. အတည်ပြုလိုလျှင်, သဘောတူညီချက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနေအသုံးပြုပါမည်.
29 ဇူလိုင်လ 2019, update ကို
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်၎င်းတို့၏နိုင်ငံတွင်ညှင်းဆဲနိုင်ပါတယ် US မှာခိုလှုံခွင့်မရှာနိုငျသောကပြောပါတယ်. THE. ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ခိုလှုံခွင့်ဥပဒသူတို့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြလျှင်လူဦးနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ပြောပါတယ် “အထူးသဖြင့်လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့”. ယခုတိုငျအောငျ, ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များ၏အတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသူတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီး. သို့သော်ရှေ့နေချုပ်ဘားမိသားစုအဖွဲ့ဝင်မရှိပါဘူးပြောပါတယ်.
သင့်ရဲ့ချက်ချင်းမိသားစုမှာတစ်စုံတစ်ဦးကခြိမ်းခြောက်ပြီဆိုရင်, အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း, သင့်အနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ခိုလှုံခွင့်ရှာတဲ့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်မသုံးလို့ရပါတယ်.
24 ဇူလိုင်လ 2019, update ကို:
တစ်ဦးကအမေရိကန်တရားသူကြီးစိုးမိုးရေးကဆိုပါတယ် 16 ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအပေါ်ဇူလိုင်လဥပဒေရေးရာမဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါစည်းမျဉ်းအမေရိကန်နှင့်မက္ကစီကိုတို့အကြားနယ်စပ်မှာရောက်လာသူကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှသာအမေရိကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကပြောပါတယ်. THE. သင်လမ်းမပေါ်တွင်အခြားတိုင်းပြည်တွင်ခိုလှုံခွင့်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပါလျှင်. San Francisco မှာတရားသူကြီး Jon Tigar သို့သော်အမေရိကန်ကြောင်းအုပ်ချုပ်. THE. သူတို့ကခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုလကျခံဖို့ဆက်လက်ရမယ်, သူတို့ကတခြားနိုင်ငံများတွင်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားကြပြီမဟုတ်ရင်တောင်. သူစိုးမိုးရေးအမေရိကန်ဥပဒေနှင့်အ fit ကြောင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာအံ့သောငှါအဘယ်သူဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ကွန်ဂရက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ကြောင်းမပြုခဲ့ဟုဆိုသည်.
23 ဇူလိုင်လ 2019, update ကို:
အမေရိကန်အစိုးရ. THE. သူကကြေညာလိုက်သည် 22 ဇူလိုင်လထုတ်ယူ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အရှိန်ဖြစ်ပါတယ်, ယနေ့စတင်.
အဆိုပါ EE ကနေလူတွေပြန်ပို့ Accelerated အဆင့်နည်းလမ်းများ. THE. လျင်မြန်စွာ. ယနေ့စတင်ခြင်း, ဒါဟာထက်နည်းနှစ်နှစ်နိုင်ငံအတွင်းခဲ့ကြသူအထောက်အထားမဲ့လူတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ဤလုပ်ငန်းစဉ် “အစာရှောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်” ဒါဟာလူတွေကိုပြန်ပို့မခံရမီတရားရုံးတွင်ကြားနာမှုမရကြဘူးဆိုလိုသည်. ဒါဟာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရန်လျှောက်ထားပါဘူး, ဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များ. သငျသညျကိုဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုရင်သူရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူနှင့်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားလိုသောကြောင့်, ကွောကျရှံ့သောဇာစ်မြစ်၏သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပြန်ရှင်းပြပါ. ထိုအခါ, အဆိုပါဖမ်းဆီးအရာရှိအင်တာဗျူးတစ်ခုခိုလှုံခွင့်အရာရှိကမှသူ့ကိုပေးပို့ရပါမည် “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်”.
သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ယင်းအရှိန်မြှအဆင့်အကြောင်းပိုမို. သင်တို့သည်လည်းဖတ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမို.
တစ်ခု update ကို 16 ဇူလိုင်လ, 2019:
ယနေ့အမေရိကန်ထံသို့လာသောသူသည်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအသစ်တစ်ခုစိုးမိုးရေးရှိ. အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနနှင့်အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည်အမေရိကန်-မက္ကဆီကန်နယ်စပ်ထံသို့လာသောသူသည်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပထမဦးဆုံးသူတို့အမေရိကန်နယ်စပ်မရောက်မီခရီးထွက်ရှိရာအခြားတိုင်းပြည်တွင်ခိုလှုံခွင့်ရှာအံ့သောငှါရမည်ဟုပြောပါ. သူတို့ကအမေရိကန်ဟာသူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်အခြားတိုင်းပြည်တွင်ခိုလှုံခွင့်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရလျှင်သူတို့ကသာအမေရိကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ဤနည်းဥပဒေကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ခုစလုံးကိုသက်ရောက်မှု. သင်ဂွာတီမာလာသို့မဟုတ်မက္ကစီကိုခိုလှုံခွင့်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသကျသပွေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလျှောက်ထားပါဘူး, သို့မဟုတ်သင်လူကုန်ကူးမှုရဲ့သားကောင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင်.
2 ဇူလိုင်လ 2019, update ကို:
တစ်ဦးကအမေရိကန်တရားသူကြီးအမိန့်ကိုဧပြီလကပြောပါတယ် 2019 ရှေ့နေချုပ်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါတရားသူကြီးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတ်မရှိကျင်းပမဖြစ်သင့်ကြောင်းပြောပါတယ်.
ရှေ့နေချုပ်၏အမိန့်သင့် ဇူလိုင်လစတင်. အဆိုပါအမိန့်အချို့ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပြသကြသူကပြောပါတယ် “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” သူတို့ကမိမိအခိုလှုံခွင့်ကြားနာသည်အထိထိန်းသိမ်းထားဆက်လက်တည်ရှိရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. (နီးပါးရှိပါတယ် 900,000 လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကြားနာဆိုင်းငံ့အမှုပေါင်း, နှင့်တက်ယူနိုင်ပါသည်3တစ်ဦးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်ဘို့နှစ်ပေါင်းဆုံးဖြတ်). သို့သော်တရားသူကြီးကအမိန့်အမေရိကန်ဥပဒေဆန့်ကျင်ကပြောပါတယ်. သူမသည်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်.
တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာသူတို့အာမခံဖြင့်ထိန်းသိမ်းခံသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိထားရမည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးကခွင့်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်. ဒါကအာမခံကြားနာဟုခေါ်သည်. အဆိုပါတရားသူကြီးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအာမခံကြားနာခံယူသင့်ကြောင်းပြောပါတယ်.
အမေရိကန်အစိုးရများ. THE. နှင့်မက္ကစီကိုသူတို့ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတိုးချဲ့နေကြသည်ဟုဆိုသည် (မူဝါဒက “မက္ကစီကိုနေ”).
၎င်းတို့၏အမှုများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးများတွင်လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာကြံပြည်သူ့မက္ကစီကိုမှပြန်လာသောလျက်ရှိသည်. protocols ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ El Paso အတွက် San Diego မှနှင့် Calexico များတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်. အမေရိကန်အစိုးရ. THE. သူကပရိုတိုကော EE အကြားနယ်စပ်တလျှောက်တွင် entry ကိုအများစုဆိပ်ကမ်းများတွင်အသုံးပြုဆိုပါတယ်. THE. နှင့်မက္ကစီကို. အဆိုပါမက္ကဆီကန်အစိုးရကမက္ကစီကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုစောင့်ဆိုင်းခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်, အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နှင့်ပညာရေး.
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအဖွဲ့များ protocols များအန္တရာယ်နှင့်မှားကြောင်းပြောပါ. သူတို့ကနိုင်ငံရေးကြောင့်ခက်ခဲခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူတို့လိုအပ်သည့်ဥပဒေရေးရာအကူအညီရစေသည်သည်ဟုဆို. သူတို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးများတွင်သစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆန့်ကျင်ဆွဲဆောင်ကြသည်.
သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် လက်တွေ့အသေးစိတ် “မက္ကစီကိုနေ”. သင်တို့သည်လည်းသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုနိုင် protocol များပေါ် DHS.
update ကို 17 ဧပြီလ 2019:
အဆိုပါ EE ၏ရှေ့နေချုပ်. THE. သူကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကြားနာစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေလျက်အချို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုပါမနိုင်ကပြောပါတယ်.
ဒီအမိန့်ကိုမှီတိုငျအောငျစတငျပါဘူး 15 ဇူလိုင်လ 2019. အသစ်အလို့ငှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်လူတွေကိုလျှောက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာကွပါစ. တချို့လူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးခိုလှုံခွင့်ကြားနာမတိုင်မီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းစေခြင်းငှါ.အမိန့်ကိုဖတ်ပါ
entry ကို၏ဆိပ်ကမ်းများမှာခိုလှုံခွင့်ရှာကြံရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အသစ်အမိန့်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါ, နှင့်ကလေးများနှင့်အတူမပါဘဲသားသမီးများသို့မဟုတ်မိသားစုများလျှောက်ထားပါဘူး. entry ကို၏ဆိပ်ကမ်းများမှာသို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်အတူခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်အာမခံလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်ခံရဖို့ဆက်လက်. အာမခံသငျသညျသူနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကြားနာဘို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုသက်သေပြဖို့တရားရုံးမှပိုက်ဆံ၏ကြီးမားသောပေါင်းလဒ်ပေးဆောင်ဆိုလိုတယ်.
ဤတောင်းဆိုမှုကိုနှင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသတင်းရှိလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်.
25 ဇန္နဝါရီလ 2019 updates များကို:
အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနက၎င်း၏စတင်နေပြီ “ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ protocols များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး” မက္ကစီကိုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားနယ်စပ်တလျှောက်တွင်.
စန်း Ysidro ၏နယ်စပ်ကူးမှာခိုလှုံခွင့်ရှာကြံပြည်သူ့မက္ကစီကိုမှပြန်လာသောနှင့်သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည်အထိအဲဒီမှာစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်. လုပ်ငန်းများ၌. အဆိုပါအမေရိကန်အစိုးရကသူတို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မက္ကဆီကန်အစိုးရကလူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြောပါတယ်. အဆိုပါမူဝါဒအသစ်မပါဘဲအရွယ်မရောက်သေးသူလျှောက်ထားပါဘူး (အောက်မှာကလေးတွေ 18 နှစ်ပေါင်းလူကြီးများမဟုတ်) သို့မဟုတ်မက္ကဆီကန်နိုင်ငံသားများ.
နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပြီးတဲ့နောက်, ပညတ္တိကျမ်းအင်တာဗျူးပေးထားရမည်ဖြစ်သည်ပြောပါတယ် “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်”. အဆိုပါအင်တာဗျူးတစ်ခုခိုလှုံခွင့်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ကွောကျရှံ့သောအင်တာဗျူးလွန်သွားလိုလျှင်, သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပါလိမ့်မည်ကပြောပါတယ် “DHS အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တစ်ခု "သတိပြုပါလက်ခံရရှိလိမ့်မည်’ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးတွင်ကြားနာဘို့”. သစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကြောင့်,, သူတို့ကအမေရိကန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေအစားမက္ကစီကိုမှပေးပို့. THE.အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Protocols ကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ
အကြောင်းကိုရှိပါတယ် 800,000 ခိုလှုံခွင့် applications များလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ. ဒါကစာရင်းရဲ့အဆုံးမှာလူများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ချောင်းမြောင်းကိုဆိုလိုသည်. မက္ကစီကိုစောင့်ဆိုင်းလူတွေကစာရင်း၏အဆုံးသို့မသွားပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကိုရှေ့နေ EE ကိုရှာဖွေဘို့ဒါပေမယ့်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်. THE.
သူတို့ကိုကူညီနိုင်ရန်. တောင်မှရှည်ချောင်းမြောင်းပြီးနောက်, အများစုမှာခိုလှုံခွင့် applications များပယ်ချနေကြသည်. လူအနည်းငယ်ကသာခိုလှုံခွင့်ပေးသနားနေကြတယ်.
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လူသိများသည် “မီတာတိုင်းတာခြင်းများပါဝင်သည်။” ဒါဟာနယ်စပ်ဒေသမှာစောင့်ဆိုင်းကလူကသာအစုတခုအရေအတွက်ကနေ့တိုင်းလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. မီတာ entry ကို၏အခြားဆိပ်ကမ်းများမှာအသုံးပြုသည်, လွန်း.သင်ကြား မီတာမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာထံမှလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သတ္တုရိုင်း.
အဆိုပါကြေငြာချက်လည်းမက္ကစီကိုစောင့်ဆိုင်းနေလူတွေကိုသူတို့ရဲ့တရားရုံးကြားနာဘို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟု. ဒါပေမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသာသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ကြားနာမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်. ကြွင်းသောအရာပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်.အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်အပြည့်အဝကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ
19 ဒီဇင်ဘာလ 2018 – နှစ်ခုမွမ်းမံမှုများ:
တစ်ဦးကအမေရိကန်တရားသူကြီး. THE. ဒါဟာဇွန်လခိုလှုံခွင့်အတွက်လုပ်စိုးမိုးရေးပြောင်းလဲမှုသော့ခတ်ထားသည်.
အဆိုပါ 11 ဇွန်လ 2018, အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ယခင်ရှေ့နေချုပ်, ဂျက်ဖ် Sessions, သူကယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏နေအိမ်နိုင်ငံများရှိအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ဂိုဏ်းထွက်ပြေးလာသောကလူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားမရဘူးဆိုပါတယ်. ဒါပေမယ့် 19 ဒီဇင်ဘာလ, တရားသူကြီး Emmet Sullivan ကသစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကိုတရားမဝင်ပြောပါတယ်. သူသည်ဤရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေဆဲနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်ဆိုပါတယ်.
ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရှာခွင့်ရှိသည်ဆိုလိုသည်. THE. ဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏အကြောင်းရင်းများများအတွက်. သငျသညျပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမီကိုကြားရရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက် အဘယ်သူမျှမ ဒါဟာသူ့တောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်. လူအနည်းငယ်ကသာခိုလှုံခွင့်ပေးသနားနေကြတယ်.
နိုဝင်ဘာလအတွက်, နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့ input port တခုသို့သွားရသူကိုသာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါအသစ်တခုအုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုး. အဆိုပါ 19 နိုဝင်ဘာလ, တရားသူကြီး Jon Tigar သစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကိုရပ်တန့်ကအမေရိကန်ဥပဒေဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်. တရားသူကြီးယခုတစ်တရားရုံးမိန့်အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဆက်လက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်.
အဆိုပါတရားရုံးမိန့်သစ်ကိုအုပ်စိုးမှုအပေါ်တရားသူကြီးများ၏တားမြစ်ချက်ကိုဆက်လက်မည်ဟုဆိုလိုသည်. ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလူများ၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုများကို process ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်, သူတို့အနေနဲ့ဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကိုတဆင့်မသွားဘဲနေရင်တောင်. ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာရ အဘယ်သူမျှမ ဒါဟာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခြင်းကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိရန်နေဆဲအလွန်ခက်ခဲသည်.
update ကို 19 နိုဝင်ဘာလ 2018:
တစ်ဦးကအမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီး. THE. သူမှသမ္မတအမိန့်ကိုပိတ်ဆို့ထားသည် 19 ဒီဇင်ဘာလ. အဆိုပါတရားသူကြီးသမ္မတအမိန့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တရားဆန့်ကျင်တတ်သူကပြောပါတယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တရားကိုအမေရိကန်မြေပေါ်တွင်လူပေါင်းခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်. ဒါဟာသူတို့အနေနဲ့ဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကိုဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်ဟုမဆိုပါဘူး. အဆိုပါ 19 နိုဝင်ဘာလ, တရားသူကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့်အလိုက်နာရမယ်ဆိုပါတယ်.
၏လုပ်ပိုင်ခွင့် 19 နိုဝင်ဘာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကိုတဆင့်မသွားဘဲသူကလူမျိုး၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုများကို process ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်. အာဏာရဤလူလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းပြောပါတယ်. သို့သော်ဤလုပ်ပိုင်ခွင့် အဘယ်သူမျှမ ဒါဟာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခြင်းကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိရန်နေဆဲအလွန်ခက်ခဲသည်.
8 နိုဝင်ဘာလ 2018
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနယ်စပ်မှာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထားပါတယ်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသည့် EE ၏တဲ့ input port တခုကိုသွားသင့်ကြောင်းပြောပါတယ်. THE.
အဆိုပါစည်းမျဉ်းသောကြာနေ့သန်းခေါင်အချိန်၌စတင်မည်9နိုဝင်ဘာလ. ဒါဟာကြာရှည်ခံ 90 နေ့ရကျ. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုလူကြီးမပါဘဲသားသမီးများလျှောက်ထားပါဘူး.
ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့်လူဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်လျှင်ဆိုလိုသည်, တစ်ခုဝင်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းကို မှလွဲ., သူတို့ကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်. သငျသညျကြောင့်အထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုခံခြင်းငှါ “ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” (လူလေးယောက်အတွက်လျော့နည်းတစ်ခုထက် get). သို့သော်လူအများစုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်.ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ကွောကျရှံ့သောအကြောင်းပိုမို Read
US မှာပြီးသားနေသောလူများအတွက်သစ်ကိုအုပ်စိုးမှုကိုအဘယ်အရာကိုမ. THE. ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေလျက်?
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ရောက်ရှိလာသောလူများကိုအတွင်းပြီးသားနေသောလူမျိုးအကျိုးသက်ရောက်စေပါဘူး9သန်းခေါင်မတိုင်မီနိုဝင်ဘာလ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေများသူတို့အမေရိကန်မြေပေါ်တွင်အခါရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံခွင့်ရှာကွပါသညျဟုဆိုကွသ, သို့သော်, အဘယ်မှာသူတို့ထဲသို့ဝင်. ဒါကြောင့်လူထုအခြေပြုလူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများကသစ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုတိုက်ခိုက်နေနေကြတယ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့အခညျြနှောငျခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှအပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်. အဆိုပါ 11 ဇွန်လ 2018, တရားရေးဝန်ကြီး, ဂျက်ဖ် Sessions ကလူမူရင်းမိမိတို့၏နိုင်ငံတွင်းရှိအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ဂိုဏ်းထွက်ပြေးလာသောကပြောပါတယ်, ယေဘုယျအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုလက်ခံမရ.
သူတို့မက္ကစီကိုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားနယ်စပ်ခြင်းငှါလာကြပါလျှင်ဤပြောင်းလဲမှုအများအားဖြင့်သူတို့အားခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအပေါ်သက်ရောက်မှု. သငျသညျဖြစ်ကောင်းဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်မှာသင်၏အသက်တာအောင်သည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေလာ, ဒါမှမဟုတ်သင်ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သင်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသင်၏သားသမီးစောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးအကြမ်းဖက်နေအိမ်စွန့်ခွာနေ. ဤရွေ့ကားသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသငျသညျကြောင့်ဤအကြောင်းပြချက်၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်မခံမယူနိုင်ပါတယ်လို့ပြော.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လက်ခံရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. အများစုမှာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလက်ခံခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်. ပညတ္တိကျမ်းကိုသင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုကွောကျရှံ့လျှင်သင်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ပြောပါတယ်:
သငျသညျသူတို့အားအကြောင်းပြချက်မဆိုရောက်လာပြီရင်တောင်, ဒါဟာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်၏အာဏာပိုင်များထံသက်သေပြရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ် (U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE))ခိုလှုံခွင့်များအတွက်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီစာမျက်နှာ Read
အားလုံးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစေခြင်းငှါနားလည်ရမယ် (တစ်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာနေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ) ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက်. လူအတော်များများဟာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိဖို့သူတို့သားများမှကွဲကွာခဲ့ကြ. မှ 20 ဇွန်လ, ဒီခွင့်မပြုပါ. မိဘများသူတို့ကလေးတွေကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စုများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယခုအချိန်တွင်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရလျှင်သူတို့သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးများကိုကူညီလုပျဆောငျနိုငျသနညျးငယျရှိ.
သင်တစ်ဦးရှေ့နေတောင်းခံဖို့လိုအပ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, သင်တစ်ဦးရှေ့နေပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သို့သော်သင်မမေးရမည်. သငျသညျပွောသငျ့, "ငါသည်ယခုရှေ့နေစကားပြောချင်တယ်။ " သင်ရှေ့နေမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးအပ်ခြင်းခံရခင်အထိသငျသညျစကားပြောရန်လူတစ်ဦးချင်းစီကိုတောင်းဆိုနေတာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ.
သင်သည်သင်၏ခိုလှုံခွင့်အင်တာဗျူးဖြုန်းခဲ့လျှင် ("ယုံကြည်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်" ဟုအဆိုပါအင်တာဗျူးကိုခေါ်), သငျသညျခိုလှုံခွင့်အဘို့သင့်အမှုတင်ပြတရားသူကြီးတစ်ဦးရှေ့တော်၌ကြားနာပြီ. ဒီတစ်ခါလည်းဒီကြားနာအချိန်ကြာမြင့်စွာအောင်မြင်ခံရဖို့; စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းသငျသညျထိန်းသိမ်းရေးကနေဖြန့်ချိရမည်ဖြစ်သည်.
သို့သော်, အချို့သောထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများပင်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစောင့်ရှောက်. အဆိုပါ2ဇူလိုင်လ, ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကြောင်းမရှိရှိလျှင် ICE သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးပြီးနောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထိန်းသိမ်းထားမည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်. သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးအပြီးတွင်အဖမ်းခံခဲ့ခံနေတယ်ဆိုရင်, ရှေ့နေမှပြောဆိုရန်မေးမြန်းပါ.
စပိနျစကားအော်ပရေတာမရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. hours သောကြာနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့များမှာ 8:00 နံနက်. တစ်ဦး 8:00 p.m. (အရှေ့ပိုင်းအချိန်). သင်တစ်ဦး ICE ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာအတွင်း၌ထံမှတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုရင်, မြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုသုံးပါ 9116 # အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ platform ပေါ်တွင်.သငျသညျခိုလှုံခွင့်ရှာသည်သင်၏မိဘများသို့မဟုတ်သင်၏သားသမီးကွဲကွာနေခဲ့ကြရတယ်လိုလျှင်, မခေါ်သတင်းအချက်အလက်များလိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ထိန်းသိမ်းရေးအမေရိကန်ကတင်ပြထားပါတယ် (U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE)) အယ်လ် 1-888-351-4024
ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးရုံးနှင့်အတူ ICE အကျင့်ကိုကျင့် (ORR) တည်နေရာအသေးအဖှဲ. သင်တို့သည်လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ် ORR မှာမိဘ Hotline 1-800-203-7001 သင်ထင်လျှင်အမေရိကန်အစိုးရ၏သင့်ကလေးရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦး ICE ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုရင်, အရေအတွက်ကကိုအသုံးပြုသည် 699# အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ platform ပေါ်တွင်. ရရှိနိုင် 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်, စပိနျသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ.
သငျသညျ (သို့မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေများ, မိသားစု, သို့မဟုတ်ရှေ့နေ) ICE ORR ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့စေခြင်းငှါ:
ဆက်သွယ်ပါ ICE အီးမေးလ်က – Parental.Interests@ice.dhs.gov
အီးမေးလ်က ORR ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ – information@ORRNCC.com
US မှာခိုလှုံခွင့်: USCIS ဖြစ်စဉ်သစ်
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ Clinical, အဆိုပါ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန, အဆိုပါ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုအဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများရှာဖွေစျေးသိပ်မကြီးတဲ့.